Smart LED Linear Mwenje Kudzora Nzira
ne admin pane 21-08-21
Smart LED Linear Mwenje Kudzora Nzira Nekuvandudzwa kwehungwaru tekinoroji, isu ikozvino tave nenzira dzakasiyana dzekudzora nzira mumunda wekuvhenekesa. Nhasi tichakutora iwe kuti utarise kune dzakangwara kudzora nzira dzemwenje. Smart inobata kutonga kune Vashandisi vakajairira tra ...
Linear Lighting yekugadzira nyanzvi - Webhusaiti yepamutemo yeLuxury yakatangwa zviri pamutemo.
Kutanga musi wa9 Nyamavhuvhu, unogona kuwana kubatana kwekushambadzira neLuxury mwenje nekushanya www.luxury-light.com. Luxury yakavambwa muna 2011, ichitarisa yakangwara fenicha yemuno magetsi magetsi, akazvimiririra akagadzirwa marambi emutsara akakodzera akasiyana siyana ezvekushandisa zviitiko, uye acha soo ...
Zvakanakira gumi zvemwenje dze LED6-10
ne admin pane 21-07-12
Inobatsira matanhatu, yakafara application dura Nekuda kwekuumbana kwayo, yega yega unit LED chip iri 3 ~ 5mm mativi kana kutenderera, saka inonyanya kukodzera kugadzirira michina ine yakaoma modelling maitiro. Semuenzaniso, kugadzirwa kwezvinyoro, zvinokwanisika machubhu, zvidimbu zvemwenje, nemwenje yakasarudzika, parizvino chete ...
Zvakanakira gumi zvemwenje dzeLED1-5
Mukana mumwe. Muviri wakareruka idiki diki mwenje we LED idiki, yakanaka kwazvo LED chip yakavharirwa mune yakajeka epoxy resin, saka idiki kwazvo, yakajeka, inogona kuchengetedza yakawanda zvinhu uye nzvimbo mukugadzira nekushandisa. Inobatsira maviri, yakaderera kwazvo simba rekushandisa Iyo inoshanda vo ...
Nzira yekusarudza iyo LED Loght
Mumakore mashoma apfuura, iko kushandiswa kweLED mumunda wekuvhenekera kwave kuwanda uye kuwanda, uye marambi eLEM anga achigara achiunza iwo matsva, nemhando dzakasiyana, uye ave nzvimbo yakanaka muhupenyu hwedu. Saka, sei kusarudza akakodzera mwenje mwenje? Ehezve, munhu wese b ...
aruminiyamu chiwanikwa chiteshi chakatungamira ubvise mwenje
1. Chii chinonzi aruminiyamu chiwanikwa chiteshi chakatungamira ubvise mwenje aruminiyamu chiwanikwa chiteshi chakatungamira ubvise mwenje = aluminium alloy chiteshi + yakavakirwa-mukati LED tambo + yekunze dhiraivha simba. Inofananidzwa neakapedza mwenje mwenje we fluorescent, aruminiyamu chiwanikwa chiteshi chakatungamirwa mwenje mwenje zvinonyanya kugadzirwa zvigadzirwa, whic ...